Khudbadii Farmaajo waxay ahayd mid hurin doonta colaad - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Khudbadii Farmaajo waxay ahayd mid hurin doonta colaad
Khudbadii Farmaajo waxay ahayd mid hurin doonta colaad
Khudbadda Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay Furitaanka kalfadhiga 6 ee Golaha Shacabka ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya waxay aheyd kudbad isburineysa, aan waafaqsaneyn dhaqanka nidaamka dimoqradiga ah ee dastuurka kmg tilmaamayo, waxaana ka muuqatay in Madaxweynaha uusan aaminsaneyn sarreynta sharciga.
Soo laguma heshiin in la cibirtiro dhaqankii iyo afkaartii hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed?
Ilaalinta qarannimada soomaaliya waa ilaalinta sarreynta sharciga iyo nidaam dowli ah ee shacabku heshiis ku yahay. hadal iyo boolo xoofteyn laguma ilaalin karo qaranka soomaaliyeed.
Waxaa mar kale nasiib darro ah in Madaxweyne Farmaajo ku guuldareystay inuu furo barlamaanka federaalka oo dhan – Golaha shacabka iyo Aqalka Sare. Maxaa laga rabaa DG haddii 2 aqal ee Barlamaanka Federaalka wada shaqeyneyn?
Madaxweyne Farmaajo wuxuu la hadlayay dad aan la socon xaaladda Soomaaliya ku sugan tahay.
Dalka waxaa xoog ku haysta qofka ku amar ku taagleynaya dhaqaalaha iyo Ciidammada dowladda oo loo adeegsanayo sida xun oo ka baxsan sharciga iyo dhaqanka wanaagsan. Siyaasi tilmaamay ku xadgudubka xuquuqdiisa muwaadin iyo sharciga dalka ama maxkamad sare dacwo u gudbiyay xoog dalka kuma haysto kuna qabsan maayo haddii aan lagu kallifin.
Guud ahaan Khudbadu waxay aheyd cagajugleyn iyo hurin colaad.
WQ. Dr. Maxamuud Culusow
Previous articlehaweeney kamid aheyd guddiga Farsamada dhisamaha Galmudug oo is casihay
Next articleCiidanka Turkiga oo hadda duqeynaya Waqooyiga Suuriya